Olee otú iji wepu data site na Websaịtị na Eke Ọhịa? - Azịza ya
A ihe ntanetị ngwa ngwa na-ewepụta data ma nye ya ya usoro a pụrụ iche iji nyere ndị na-enyocha weebụ aka ịgụta ihe ha chọrọ. O nwere ọtụtụ ngwa na ahịa ego, ma enwere ike iji ya na ọnọdụ ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, ndị ọrụ jiri ya iji tụnyere ego nke ngwaahịa dị iche iche.
Weebụ Weebụ na Eke Ọgba
Eke Ọgba bụ asụsụ mmemme dị irè na nnukwu nhazi na koodu a pụrụ ịgbanwee - εφημερευοντα φαρμακεια κυριακη. Ọ na-adabara ọbụna ndị mbido n'ihi ọtụtụ nhọrọ dị iche iche ọ nwere. E wezụga nke ahụ, Eke na-eji ọbá akwụkwọ pụrụ iche nke a na-akpọ Mara Mma Ofe. A na - ede HTML site na iji HTML, nke na - eme ka otu webpage bipụta akwụkwọ. Otú ọ dị, ndị ọrụ kwesịrị icheta na ebe nrụọrụ weebụ dị iche iche anaghị enye ha ihe ọ bụla n'ime ihe ndị dị mma. N'ihi ya, nchịkọta weebụ yiri ka ọ bụ nhọrọ dị irè na nke bara uru. N'ezie, ọ na-enye ndị ọrụ ọrụ ohere ime ihe dị iche iche ha na - eji Microsoft Word eme.
LXML & Arịrịọ
LXML bụ nnukwu ọbá akwụkwọ nke a ga - eji mee ihe na ngwa ngwa XML na ngwa ngwa.N'ezie, ọbá akwụkwọ LXML na-enye ohere ndị na-enyocha weebụ iji mee osisi ndị a pụrụ ịghọta XPath n'ụzọ dị mfe. More kpọmkwem, XPath nwere ozi niile bara uru. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ndị ọrụ chọrọ naanị wepụ utu aha ụfọdụ saịtị, ọ dị mkpa ka ha buru ụzọ chọpụta ụdị edemede ọ bi na ya.
Ndị mbido nwere ike isiri gị ike ide koodu. Na asụsụ mmemme, ndị ọrụ ga-ede ọbụna ọrụ ndị kachasị mkpa. Maka ọrụ ndị dị elu karị, ndị na-enyocha weebụ ga-eji usoro data ha. Otú ọ dị, Eke Ọgba nwere ike inyere ha ezigbo aka, n'ihi na mgbe ọ na-eji ya, ha agaghị akọwa nkọwa ọ bụla data, n'ihi na ikpo okwu a na-enye ngwá ọrụ pụrụ iche maka ndị ọrụ ya ịrụ ọrụ ha.
Iji kpochapụ otu ibe weebụ, ha kwesiri ibudata ya site na iji akwukwo ogugu Python. N'ihi ya, ọbá akwụkwọ arịrịọ ga-ebudata ọdịnaya HTML site na ibe ụfọdụ. Ndị na-enyocha weebụ kwesịrị icheta na e nwere ụdị arịrịọ dịgasị iche iche.
Iwu Eke Ọgba
Tupu ịwaa ebe nrụọrụ weebụ, ndị ọrụ kwesịrị ịgụ usoro ha na ọnọdụ ha iji zere nsogbu iwu ọ bụla n'ọdịnihu.Dịka ọmụmaatụ, ọ bụghị ezigbo echiche ịrịọ data kwa oke ike. Ha kwesiri ijide n'aka na usoro ihe omume ha di ka mmadu. Otu arịrịọ maka otu webpage kwa nke abụọ bụ nhọrọ dị oke mma.
Mgbe ị na-eleta saịtị dị iche iche, ndị na-enyocha weebụ ga-elekwasị anya na nhazi ha n'ihi na ha na-agbanwe site n'oge ruo n'oge. Ya mere, ha kwesiri ịlaghachi na saịtị ahụ ma degharịa koodu ha ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Ịchọta ma wepụ data sitere na intaneti nwere ike ịghọ ọrụ siri ike na Eke Ọgba nwere ike ime ka usoro a dị mfe dịka o nwere ike ịbụ.